ဗေဒင် Archives - Page 24 of 27 - Latest Myanmar News
ကံကောင်းစေသည်ဟုဆိုသည့် ရှေ့ပြေး နိမိတ်လေးများ
ကံကောင်းစေ မည့်ရှေ့ပြေး နိမိတ် တွေ အကြောင်း လူတစ်ယောက်ကံကောင်းလာတော့မယ်ဆိုတာကို ရှေ့ပြေးနိမိတ်တွေကြည့်ပြီး သိရှိနိုင်ပါတယ်…နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ နိမိတ်ကင်္ကေတတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိနေတက်ပါတယ်။ အယူအဆအမျိုးမျိုးထဲကမှ လူအများစု နား လည် လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ နိမိတ်သင်္ကေတတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သင့်ဆီကို ကံကောင်းခြင်းတွေ မကြာခင် ရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုရှေ့ပြေးနိမိတ် သင်္ကေတတွေကို မြင်တွေ့၊ ဖြစ်ပေါ် ရတတ်ပါတယ်နော်။ ငှက်တွေ အသိုက်လာဖွဲ့တာ – ငှက်တွေက သင့်ရဲ့ နေအိမ်၊ တိုက်ခန်း (သို့) ရုံးခန်း၊ ဆိုင်ခန်း အဆောက်အအုံတွေမှာ အသိုက် လာဖွဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ ရှေ့ပြေးနမိတ်တစ်ခုပါ။ငှက်တွေက ကိုယ့်ဆီမှာလာပြီး အသိုက်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာ သင့်ဆီမှာ ကောင်းတဲ့ (positive energy) တွေ ရှိနေတယ်လို့ မှတ်ယူကြပြီး … Read more
June 7, 2020 by Latest Myanmar News
ဈေးဆိုင်လူစည်စေပြီးဖောက်သည်များစေသောယတြာ မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ..ဒီနေ့ကတော့ ဈေးဆိုင်တွေမှာလူစည်စေပြီးဖောက်သည်များစေတဲ့ ယတြာလေးကို. ပညာ ဒါနပြုပါ့မယ်….. ကျမအသက်၂၂နှစ်လောက်က မနောမယဂျာနာနယ်မှာလည်းရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်.. အခုအဘဆရာကြီးမင်းသိင်္ခသင်ပေးတဲ့ဆိုင်တွေမှာလူစည်ပြီးဖောက်သည်များစေတဲ့ယတြာကိုပြောပြမှာပါ.. အရင်ဆုံးဆိုင်ရှေ့ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး…ရေတပုံးထဲရေထည့်ပါ ရေမန်းထည့်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်..ကျမဟောခန်းမှာတော့ကျမဆီယတြာလာယူသူတွေကို ကျမရဲ့ဒုတိယဆရာဖြစ်တဲ့အစ်ကို ဆရာသဲသင်ပေးတဲ့ တက္ကာလိကစန်းနက္ခတ်ဖြတ်သန်းချိန်မှာစီရင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ မျက်နှာပွင့်နံ့သာဆီဖြစ်ဖြစ်(သို့မဟုတ်)တစ်နှစ်တခါ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညမှာစုပေါင်းဖော်စပ်တဲ့ အဘဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ဈေးခေါ်မျက်နှာပွင့်နံ့သာဆီ ဖြစ်ဖြစ် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထိုနံ့သာဆီကိုပါရေပုံးထဲရောထည့်ပြီး..ကိုယ်အမြဲရွတ်ဆိုနေကျ ဂါထာ၊မန္တာန်တခုခုကိုရွတ်ဆိုပြီးမြေစောင့်နတ်နဲ့ ၃၁ ဘုံသားကိုမေတ္တာပို့ပါ.ဆုတောင်းပါမြေစောင့်နတ်က ကုန်သွယ်လယ်ယာသမားတွေ၊ကုန်သည်တွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ အဆိုရှိလို့ပါ..ဒါကြောင့်ဒါကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ပါ….အဆောင်ကတော့ တနင်္ဂနွေသားသ္မီးဆို….အိုးစည်တစ်လုံးနဲ့ ဆင်ဖြူတစ်ကောင်ထားပါ..အိုးစည်မှာဈေးဦးပေါက်ငွေထိုးပါ..အိုးစည်သေးသေးလေးတွေ ဘုရားစောင်းတန်းတွေမှာရောင်းကြပါတယ်။ (ကျမတို့အဘဆရာကြီးမင်းသိင်္ခကတနင်္ဂနွေသားပါ…ဒါကြောင့်အိုးစည်တီးတဲ့အဖွဲ့ထားတာမြင်ဖူးကြမှာပါ…ဒါကြောင့်လည်း ကျမတို့မရမ်းတလင်းခြံကြီးမှာ ဗေဒင်မေးသူ၊ယတြာချေသူတွေဟာ..လူဦးရေ ရာထောင်ချီအမြဲစည်ကားတာကိုတွေ့ဖူးကြုံဖူးကြသူတွေရှိပါတယ်။☺) တနင်္လာသားသ္မီးဆို….ကလပ်တစ်ခုပေါ် ခေါင်းလောင်းတင်ပါ ဆင်ဖြူတော်တစ်ကောင်ထားပါကလပ်ပေါ်ဈေးဦးပေါက်ငွေထည့်ပြီးခေါင်းလောင်းနဲ့ဖိပါ။ ဒီယတြာက လာဘ်လာဘရွှင်လန်းမှုမှာလည်း သီးသန့်သုံးကြပါသေးတယ် ။ အင်္ဂါသားသမီးဆို….ဆင်ဖြူတော်တစ်ကောင်ထားပါ…ဆန်ကိုဘူးနဲ့ထည့်ပြီး ဆန်ဘူးထဲဈေးဦးပေါက်ငွေ ထိုးပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးဆို…ရသေ့ကြီးဦးခန္ဓီပုံတော်ထားပါ..ဆင်ဖြူတစ်ကောင်ထားပါ..ပုလင်း၃လုံးကို လင်ဗန်းနဲ့ထိထားပါ..ထိုလင်ဗန်းထဲ ဈေးဦးပေါက်ငွေထားပါ။ ရသေ့ကြီးဦးခန္တီရဲ့ ငွေရဂါထာရွတ်နိုင်ကပို၍ကောင်းပါတယ်။ ကြာသပတေးသားသမီးဆို…ပစ်တိုင်းထောင် တစ်စုံထားပါ..ဆင်ဖြူတစ်ကောင်ထားပါ…ဖန်ထောင်ခွက်ထဲ ဈေးဦးပေါက်ငွေဖယ်ပါ။ သောကြာသားသမီးဆိုဘုရားရှင်အားသစ်သီးကို မြေအိုးနဲ့ ကပ်လှူပါ.ဆိုင်မှာ…သပြေ၆ညွန့် အုန်း၁ညွန့်ကိုထိုးပါ … Read more
မိဖုရားတစ်ဦးကဲ့သို့ အဆင့်အတန်းနှင့်နေရမည့် အမျိုးသမီး လက္ခဏာ
June 6, 2020 by Latest Myanmar News
မိဖုရားတစ်ဦး၏ အဆင့်အတန်းနှင့်နေရမည့် လက္ခဏာ အလွန်တွေ့ရခဲသော အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ လက္ခဏာဟောပြောမှု သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးခဲ့ရပေ။တွေ့ခဲ့ရသောအမှတ်အသားများကား ဆုံးဖြတ်ရ ခက်ခဲသော၊ ပုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများနှင့်သာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဆရာကြီးစံတင်အောင်(ရွှေဘို) ကလည်းဤကဲ့သို့သောလက္ခဏာရှင်ကို တွေ့ခဲ့ဘူးသည်ဟု သူ၏လက္ခဏာသင်တန်းမူ နှင့် ကိုယ်တွေ့ကျွမ်းများတွင် ဖော်ပြသည်ကို မဖတ်ခဲ့ဘူးပါ။ ” ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ” က ထိုလမ်းကြောင်းကို “ကျေးတောသူမှ မိဖုရားခေါင်ကြီးသို့”ဟု သူ၏ (၉) နှစ်ဟောစာတမ်းစာအုပ်ငယ်တွင် ၁၆-ရာစုလက်ဝါးပြင်ပုံစံနှင့်အတူဖော်ပြထားသည်ကို ဖတ်ရှုရခဲ့သည်။ ဆရာကြီးကိုင်ရို၏ကိုယ်တွေ့လက္ခဏာကျမ်းတစ်နေရာ၌ ဤသို့ဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် ဝါရှင်တန်မြို့၌ ဟောပြောစဉ် သားအမိနှစ်ဦးတို့ ကျွန်ုပ်ထံလက္ခဏာလာရောက် ကြည့်ရှုကြသည်။ မိခင်ဖြစ်သူက သူမ၏သမီးကို လက္ခဏာဖတ်ပေးရန် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Miss Lester ၏ လက်ဝါးပြင်အား သေချာစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ သူမ၏ မိခင်ကြီးရှေ့တွင် ပင် ” … Read more
June 2, 2020 by Latest Myanmar News
ဈေးရောင်းကောင်းချင်ရင် တနင်္ဂနွေများသားသမီးများ ဆိုင်ရဲ့အမြင့်တစ်နေရာမှာ အိုးစည်ရုပ်လေးကို တနင်္ဂင်္နွေနေ့ မနက်(၉)နာရီမှ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ်အတွင်း အိုးစည်လေးကိုတီးပြီး ဈေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။ တနင်္လင်္ာသားသမီးများ ဆိုင်ရဲ့အမြင့်တစ်နေရာမှာ ကလပ်ပေါ် ခေါင်းလောင်းတင်ပြီး တနင်္လာနေ့နံနက် (၉)နာရီမှ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ်အတွင်း ခေါင်းလောင်းကိုတီးပြီးဈေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။ အင်္ဂါသားသမီးများ ဆိုင်ရဲ့အမြင့်တစ်နေရာမှာ ဆင်ရုပ်လေးကို အင်္ဂါနေ့နံနက်(၉)နာရီမှ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ်အတွင်း ရေမွှေးဖျန်းပက်ကာ ဈေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ဆိုင်ရဲ့အမြင့်တစ်နေရာမှာ ဟင်္သာရုပ်လေးကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ်အတွင်း ရေမွှေးဖျန်းပြီး ဈေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။ ကြာသပတေးသားသမီးများ ဆိုင်ရဲ့အမြင့်တစ်နေရာမှာ ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ်လေးကို ကြာသပတေးနေ့ နံနက် (၉)နာရီမှ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ်အတွင်း ရေမွှေးဖျန်းပက်ပြီး ဈေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီး တင်ထားလိုက်ပါ။ သောကြာသားသမီးများ ဆိုင်ရဲ့အမြင့်တစ်နေရာမှာ သကြားတစ်ပန်းကန်ကို သောကြာနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ်အတွင်း ဈေးရောင်းကောင်းစေဖို့ ဆုတောင်းပြီးတင်ထားလိုက်ပါ။ စနေသားသမီးများ ဆိုင်ရဲ့အမြင့်တစ်နေရာမှာ … Read more
ရေ…အဓိဋ္ဌာန် ဖန်ခွက်တစ်ခွက်တွင်ရေကိုဇွန်းနှင့်(၅၄)ဇွန်းထဲ့ပါ ။ပြီးနောက်လင်ဗန်းတစ်ချပ်ရဲ့အလယ်တည့်တည့်မှာဖန်ခွက်ကိုတင်ပါ။ဘေးပတ်လည်မှာပန်း(၇)ပွင့်ဝိုင်းပါ။ မေမြို့…နှင်းဆီ..ဂန္ဓမာ..နေကြာ..သစ်ခွ ရွှေပန်း..ငွေပန်း..လင်ဗန်းပတ်လည်ဆီမီး(၉)ခွက်ပူဇော်(ထိုပန်းများမရပါကပန်း(၇)မျိူးပြည့်လျှင်ရပါသည်) ဘုရား(၇)ဆူပင့်ဖိတ်ပါ။ပူဇော်ကန်တော့.. ငါးပါးသီလခံယူ ဂုဏ်တော်(၂၇)ခေါက်ရွတ်ဖတ်မေတ္တာပို့(၃၁)ဘုံမေတ္တာပို့ပါ။ ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ အနိစ္စဒု့က္ခအနတ္တ(၃)ခေါက်ရွတ် ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ အနိစ္စ ဒု့က္ခအနတ္တ(၃)ခေါက်ရွတ် သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ အနိစ္စ ဒု့က္ခအနတ္တ(၃)ခေါက်ရွတ် ပြီးလျှင်မေတ္တာပြန်ပို့ပါ။ မေတ္တာသုတ်(၂၇)ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပါ။ မိမိ မေတ္တာပို့လိုသူ၏ မျက်နှာ ကို ပေါ်လွင်အောင် ကြည့် ၍ မေတ္တာပို့ပါ။ လိုရာဆုတောင်းပါ။ မြတ်မို Unicode ရေ…အဓိဋ်ဌာနျ ဖနျခှကျတဈခှကျတှငျရကေိုဇှနျးနှငျ့(၅၄)ဇှနျးထဲ့ပါ ။ပွီးနောကျလငျဗနျးတဈခပျြရဲ့အလယျတညျ့တညျ့မှာဖနျခှကျကိုတငျပါ။ဘေးပတျလညျမှာပနျး(၇)ပှငျ့ဝိုငျးပါ။ မမွေို့…နှငျးဆီ..ဂန်ဓမာ..နကွော..သဈခှ ရှပေနျး..ငှပေနျး..လငျဗနျးပတျလညျဆီမီး(၉)ခှကျပူဇျော(ထိုပနျးမြားမရပါကပနျး(၇)မြိူးပွညျ့လြှငျရပါသညျ) ဘုရား(၇)ဆူပငျ့ဖိတျပါ။ပူဇျောကနျတော့.. ငါးပါးသီလခံယူ ဂုဏျတျော(၂၇)ခေါကျရှတျဖတျမတ်ေတာပို့(၃၁)ဘုံမတ်ေတာပို့ပါ။ ဗုဒ်ဓံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ အနိစ်စဒု့က်ခအနတ်တ(၃)ခေါကျရှတျ ဓမ်မံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ အနိစ်စ ဒု့က်ခအနတ်တ(၃)ခေါကျရှတျ သံဃံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ အနိစ်စ ဒု့က်ခအနတ်တ(၃)ခေါကျရှတျ … Read more
May 29, 2020 by Latest Myanmar News
ရစရာ ရှိသော ကြွေးပူများ….ပေးရန်ရှိသော ကြွေးပူများ ကျေစေသော…. သဝေ မပါ ၉ ဂါထာ ပုတီးစိပ်နည်း ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ… ပုတီး တစ်လုံးချ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ….. ပုတီး တစ်လုံးချ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ…. ပုတီး တစ်လုံးချ ဒုတိယံပ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ …. ပုတီး တစ်လုံးချ ဒုတိယံပ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ …. ပုတီး တစ်လုံးချ ဒုတိယံပ္မိ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ …. ပုတီး တစ်လုံးချ တတိယံပ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ…. ပုတီး တစ်လုံးချ တတိယံပ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ… … Read more
May 28, 2020 by Latest Myanmar News
မျက်ခုံးကြည့််အဟော (၁) မျက်ခုံး၂ခု နီးစပ်နေလျှင်ရဲစွမ်း သတ္တိ ပြည့်ဝ စေပြီး ၊ ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ကောင်းသူဖြစ်လေသည်… (၂) မျက်ခုံး ထူနေလျှင်အလုပ်လုပ်ရာတွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် စူးစူးစိုက်စိုက် လုပ်တက်ပါသည်… (၃) မျက်ခုံးနှစ်ခုသည် တခုနှင့် တခု ဝေးကွာနေလျှင်သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားသူ ဖြစ်ပါသည်…. (၄) မျက်ခုံးပါးလျှင် ဟိုဟာ အလိုမကျ ၊ဒီဟာ အလိုမကျ နှင့် ချေးများတက်သည်၊ ဇီဇာကြောင်သောသူ ဖြစ်ပါသည်… (၅) မျက်ခုံးအစွန်းများ အောက်သို့ နိမ့်ကျနေလျှင် စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက် လွယ်သူ ဖြစ်သည်… (၅) မျက်ခုံးတို့ဖြောင့်တန်း နေလျှင် သတိ ဝိရိယ ရှိ၍ ၊ ရဲရင့် တည်ကြည်သော ဖြစ်သည်… (၇) မျက်ခုံး အစွန်းများအပေါ်သို့ တက်နေလျှင် … Read more
25-5-2020 မှ 31-5-2020ထိ ၇ရက်သားသမီး အဟော
May 25, 2020 by Latest Myanmar News
တစ်ပတ်စာခုနှစ်ရက်သားသမီးကံကြမ္မာဟောကိန်း (25-5-2020 to 31-5-2020) တနင်္ဂင်္နွေသားသမီး ငယ်ရွယ်သူများ အထူးစန်းပွင့်မည့်ကာလဖြစ်သလို ရုတ်တရက်အိမ်ထောင်ကျတတ်သော ကာလပါ လုပ်ငန်းနှင့်ပါတ်သက်၍ မိမိကြံရွယ်ထားသောအကြံအစည်များ အထမြောက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မည် လက်ရှိလုပ်ငန်းတွင် လက်အောက်ငယ်သားအချင်းချင်း နားလည်မူလွဲမှားခြင်း ရန်များခြင်းများ ဖြစ်နေတတ်ပါသည် ကျန်းမာရေးမှာ ဒူးအဆစ်အမြစ်များနာ၍ မလှုပ်ချင်မကိုင်ချင် ဖြစ်နေလိမ့်မည် ထီ 96ပါသောထီထိုးပါ ယတြာ ကြံတစ်ညွှန့်နှင့် သပြေ၆ညွှန့်ပူး၍ဘုရားလှုပေးပါ တနင်္လင်္ာသားသမီး အတိုက်အခံတွေ အလွန်များနေသော ကာလပါ မိမိ၏အောင်မြင်မူအပေါ်တွင် မနာလိုသူများ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပါလိမ့်မည် ဘယ်လိုအခြေအနေပဲကြုံကြုံ မိမိရဲ့ကြိုးစားမူကို လုံးဝမလျှော့ပါနှင့် နှစ်ဆတိုး၍ထပ်ကြိုးစားပါ အထူးချွန်ဆုံး အောင်မြင်မူရလာဘ်များကို ခံစားရပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးတွင် အာရုံကြောအားနည်းတတ်ပါသည် သတိမကြာခဏမေ့တတ်ပါသည် ထီ 90ပါသောထီကိုထိုးပါ ယတြာ သစ်သီး၆မျိူးဘုရားလှုပေးပါ အင်္ဂါသားသမီး ကျန်းမာရေး အထူးဂရုပြုရမည့်ကာလပါ ရုတ်တရက်ကြီး ခေါင်းတွေမူးဝေလာတတ်ပါတယ် ဒီလိုကာလတွေမှာ အစားမှားဆေးမှားဖြစ်တတ်လို့ အထူးသတိပြုရပါလိမ့်မည် … Read more